MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa soo afjaray weerarkii Al shabaab xalay ku qaaday Villa Soomaaliya, iyadoo khasaaraha dhimashada ay marayso ku dhawaan 30 qof.
Wasiirka Amniga, Maxamed Abuukar Islow oi Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Ciidamada ay dileen 5 dagaalyahan oo weerarka soo qaaday kuwaasi oo ku lebianaa Dareeska Ciidanka Booliska.
Wasiirka waxa uu ka gaabsaday inuu fahfaahin ka bixiyo khasaaraha weerarka kasoo gaarey Askarta dowladda iyo Shacabka.
Weerarka oo qaatey mudo ka badan 3 saacadood ayaa ku billowday Qarax Gaari oo ka dhacay Saaladii Maqribka xilli lagu jiray barkoontarool oo Ciidamada ay ku leeyihiin Sayidka, oo ku dhaw Villa Soomaaliya iyo Xarunta Baarlamaanka.
Qaraxa labaad oo isna ahaa mid Gaari ayaa ka dhacay Isgoyska Jubba (KM-0) halkaasi oo Ciidamada NISA ay ka difaacaan xaruntooda Habar-Khadiija.
Askari Labo Alifle ay oo magaciisa Bishaar lagu soo koobay, kana tirsanaa Ilaalada Villa Soomaaliya ayaa ku dhintay qaraxa hore isagoo isku dayay inuu Gaariga ku celiyo Barta Koontaroolka Bashir Gate.
Xildhibaan Dhag-Dheer oo kamid ah Aqalka Sare ayaa sheegay in Dawalka Gaarigiisa uu kamid yahay dadka ku dhintay weerarka xilli uu ku sugnaa Hotel-ka dhawaan la daahfuray ee Doorbin (Ex Baar FIAT).
Wèerarkan ayaa lagu soo beegay maalmo kadib markii Gollaha Wasiirada ay meel mariyeen Taliyeyaasha Booliska iyo NISA. Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka.
Muqdisho kama dhicin weerar noocan ah tan iyo markii Xilka laga qaadey Sanbaloolshe October 2017 oo NISA iyo Booliska ay ahaayeen Taliyeyaal la'aanta 4 bilood ee lasoo dhaafay.